Fifidianana · Janoary, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Janoary, 2010
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Janoary, 2010
Congo (RDC): Ny vokatry ny tsy firaharahiana
R.D. Kongo 22 Janoary 2010
Mahafinaritra ny Congoblog. Mendrika daholo ny lahatsoratra tsirairay, indreto ny tena nanaitra hatramin'ny fiatombohan'ny volana janoary teo: avy any Kisangani, Boyomais mitaraina ny amin'ny zavatra mampalahelo iainana any amin'ny toeram-pitsaboana ao amin'ny fireneny, tafiditra amin'izany ny teny baiko fantatry ny rehetra hoe: “tsy misy vola, tsy misy fitsaboana”. Nataon'i Luba...
Karaiba: Jeritodika isam-paritra 2009
Amerika Avaratra 16 Janoary 2010
Amin'izao fankalazan'ny Global Voices ny faha-dimy taonany izao, dia izao no fotoana hanararaotina hanazavàna ny antony anaovantsika izay ataontsika sy izay fiovana vitan'ny asantsika. Araka ny namintinan'ny mpiara-miasa amiko Jillian York azy hoe, “Mampiely tantara isika. Mampiely teny.” Miezaka ny ho amin'izany tokoa izahay noho ireo olona marobe miketrika amin'ny...
Bolivia: Oliravina taloha, mirotsaka ho fidiana governoran'i Beni
Amerika Latina 16 Janoary 2010
Ho an'ny maro, ny fanambarana nataon'ny filoha Evo Morales nanendry ilay mpanjakavavin'ny hatsarana taloha, Jessica Jordan, 25 taona, hilatsaka hofidiana governora ao amin'ny departemantan'i Beni amin'ny anaran'ny antoko MAS (Antoko sosialista), dia ohatry ny sangisangy tara ny datin'ny 1 aprily (fetin'ny lainga). Na izany aza, vantany vao re ny fanambarana ofisialy natao nandritra ny...
Madagasikara tamin'iny taona iny – Fizarana fahatelo -
Madagasikara 07 Janoary 2010
Teo alohaloha teo moa i Lova Rakotomalala no nanoratra ho antsika ny Madagasikara nandritra ireo volana niatombohan'ny taona 2009 izay tonga hatrany amin'ny fanonganam-panjakana nataon'i Andry Rajoelina, Ben'ny tanànan’ Antananarivo teo aloha, ka nahatafakatra azy ho eo amin'ny fitondrana. Narahin'i Mialy tamin'ny volana vitsivitsy manaraka ny fitantarana, izay mbola nahitana...
Tamberina 2009 Azia Atsimo
Bangladesh 01 Janoary 2010
Nivalona hatreo ny taona 2009 ary izao no fotoana hitodihana izay nitranga tany Azia atsimo. Ao anatin'ny tamberina misy fizarana roa no ijerentsika ireo fotoan-dehibe nanamarika io taona io ho an'ny firenena atsimon'i Azia amin'ny alalan'ny mason'olo-tsotra tia mampita vaovao. Isaorana manokana ireo mpanoratry ny Global Voices ho an'i Azia...